तुलसी घिमिरे कलाकार/निर्देशक विकासका लागि प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ- तपाईंले अहिले कुन ब्राण्ड तथा मोडलको मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? सामसुङको मोबाइल प्रयोग गर्छु । तर, मोडल भने याद छैन - यसमा तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्ने फिचर के हो ? यसको नेटवर्क तथा कनेक्शन राम्रो छ । साथै, इण्टरनेट तथा ई&nd...
सुमन पोखरेल प्रमुख कार्यकारी अधिकृतआईएमई प्रविधिको प्रयोगलाई ‘प्रडक्टिभ’ बनाउनुपर्छ- तपाईंले अहिले कुन ब्राण्ड तथा मोडलको मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? आईफोन फोरएस- यसमा तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्ने फिचर के हो ? यसको अपरेटिङ सिष्टम नै राम्रो छ । एप्लिकेशन प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ -...
जितु नेपाल (मुन्द्रे)
जितु नेपाल (मुन्द्रे) हास्यकलाकार आईप्याड किन्ने सोचमा छु - तपाईंले अहिले कुन ब्राण्ड तथा मोडलको मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? आइफोन– ४- यसमा तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्ने फिचर के हो ? चलाउन सजिलो छ । एउटा कम्प्युटरले गर्ने काम सबै यसबाटै सम्भव भएको छ - ग्याजेट्सका रूपमा तपाईंले प्रयोग गर...
भरत जोशी रेसिडेण्ट म्यानेजरहोटल याक एण्ड यती नोकिया टोनले आकर्षित गर्छ- तपाईंले अहिले कुन ब्राण्ड तथा मोडलको मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? नोकियाको मोबाइल, तर मोडल याद भएन । - यसमा तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्ने फिचर के हो ? नोकियाको टोनले मलाई एकदमै आकर्षित गर्छ । त्यस्तै यसमा भएको मेमोरी क्षमता...
कोमल वली, गायिका सामाजिक सञ्जाललाई लत बनाउनुहुँदैन- तपाईंले अहिले कुन ब्राण्ड तथा मोडलको मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? एप्पलको ‘आई फाइभ’ - यसमा तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्ने फिचर कुन हो ? अपरेटिङ सिष्टम अत्यन्त राम्रो छ । सम्पर्क नम्बर राख्न र कल डायल गर्न सजिलो लाग्छ - ग्याज...
योगेश्वर अमात्यगायक कन्भर्टिबल ल्यापटप किन्ने सोच छ - तपाईंले अहिले कुन ब्राण्ड तथा मोडलको मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? एप्पलको आईफोन फोर र सामसुङको ग्यालेक्सी एसथ्री- यसमा तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्ने फिचर के हो ? उत्कृष्ट भिडियो तथा तीव्र गतिको इण्टरनेट प्रयोग गर्न पाइन्छ - ग्याजेट्सका र...
किशोर महर्जनप्रमुख कार्यकारी अधिकृतसिभिल बैङ्क लिमिटेड फेसबुक दिनमा तीनपटक लगइन गर्छु - तपाईंले अहिले कुन ब्राण्ड तथा मोडलको मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? आईफोन फोर र सामसुङ ग्यालेक्सी एसफोर- यसमा तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्ने फिचर के हो ? आईफोन फोरमा थ्रीजी अत्यन्त राम्रोसँग चल्छ । यसले...
आवश्यकता जे हो त्यही खरीद गर्नुपर्छ
विजयराज भण्डारीअध्यक्षसीई कन्ष्ट्रक्शन - तपाईंले अहिले कुन ब्राण्ड तथा मोडलको मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? आईफोन फोर एस- यसमा तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्ने फिचर के हो ? यो चलाउन निकै सजिलो छ ।- ग्याजेट्सका रूपमा तपाईंले प्रयोग गर्ने अन्य साधन ? आईप्...
शेखर गोल्छाअध्यक्ष, नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएशन प्रविधिलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्नुपर्छ - तपाईंले अहिले कुन ब्राण्ड तथा मोडलको मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? सामसुङको ग्यालेक्सी एस थ्री- यसमा तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्ने विशेषता के हो ? स्क्रिन क्वालिटी र क्यामेरा-...
आलोक श्री सङ्गीतकार प्रविधि प्रयोग गरी ज्ञान बढाउने विषयमा ध्यान दिन्छु- अहिले कुन ब्राण्ड र मोडलको मोबाइल प्रयोग गरिरहनुभएको छ ? सोनी ब्राण्डको ‘एक्सपेरिया जेड’ । - तपार्इंलाई यसको कुन फिचर बढी मनपर्छ ? यो प्रयोग गर्न सजिलो छ । ‘वाटर पू्रफ&rsqu...